Cofttek Banyere Anyị - Ndị na-emepụta ihe eji emepụta ihe eji emepụta ihe
Cofttek Holding Oke
Cofttek Holding Limited chọtara na 2008, bụ ụlọ ọrụ ọgwụ na-emepụta ọgwụ na teknụzụ dị elu maka ijikọ mmepụta, R&D na ahịa. Ọ na-anọ na Luohe Chemical Industry Park, na-etinye aka na nyocha na mmepe nke ụlọ ọrụ ọgwụ na-aga n'ihu, na-enye ngwaahịa ọhụrụ na ọrụ dị elu maka ụlọ ọrụ ọgwụ.
Cofttek nọ n'elu ikpo okwu dị egwu, teknụzụ kemịkal na ule nyocha, na-elekwasị anya na mmepe nke API, ntanetị na kemịkal ọma, ebe a na-enye CRO, ọrụ ndị dị elu na ọrụ nyocha na ogo nyocha maka ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ biomedical.
Cofttek nwere ndị ọrụ nlekọta nwere ahụmahụ na ndị òtù R & D nke mbụ, gụnyere ọtụtụ ndị ọkachamara pụtara ìhè n'ọhịa nke usoro mmepụta ọgwụ na nchọpụta ogo ọgwụ. Ọ maara nke ọma na asọmpi dị mkpa na mpaghara ndị a nke kemịkalụ kemịkalụ, teknụzụ sịntetik, mmepe ọgwụ ọgwụ, bioengineering, wdg. Ndị ahịa na ndị mmekọ ụlọ ọrụ ahụ na-abịa site na ụwa niile, na-eme mmekọrịta dị n'etiti ọtụtụ ụlọ ọrụ ọgwụ na North America, Europe, India na China.
Ọnwụ na-adịgide na ụkpụrụ nke "Quality Basis, Ahịa mbụ, Ime ihe n'eziokwu Service, Mutual Benefit", cofttek Holding Limited. na-enye ndị ahịa ngwaahịa ndị na-enye afọ ojuju site na nyocha zuru oke na ọrụ dị elu.
nnukwu teknụzụ ọgwụ kemịkal biochemical maka ijikọ mmepụta, R&D na ahịa.
Anyị nwere ụlọ nyocha na akụrụngwa kachasị elu, ndị ọrụ R & D kachasị elu na ndị ọrụ nchịkwa.